T सल्लाहहरू तपाइँको ब्यापार ब्रोशरमा निछालो लिनुहोस् Martech Zone
Business सल्लाहहरू तपाइँको ब्यापार ब्रोशरमा निछालो लिन
आइतवार, अप्रिल २,, २०१। Douglas Karr
तपाईंको बिक्री एक पाना, मिडिया किट, ब्रोशर, पीडीएफ, उत्पाद ब्रोशर… तपाईं जे पनि कल गर्न चाहानुहुन्छ, यसलाई मद्दत चाहिन्छ। हामीले भर्खरै सँगै राख्यौं मिडिया र प्रायोजन किट साइट पछि अनुरोध पछि अनुरोध पछि गरिएको थियो।
तथ्य यो हो कि, मानिसहरू अझै कागजातहरू डाउनलोड गर्न र प्रिन्ट गर्न मन पराउँछन् र हामी अझै पनि हातले प्रिन्ट उत्पादनहरू वितरण गर्न मन पराउँछौं। एक सुन्दर प्रिन्ट टुक्रा ध्यान को एक बिट प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने तथ्यलाई उल्लेख गर्न बाहेक। यो एक भिन्नताकर्तामा परिणत भइरहेको छ र धेरै प्रत्यक्ष मेल र प्रत्यक्ष वितरण अभियानहरूले प्रतिक्रियामा अपस्वि seeing्ग देखिरहेका छन् किनकि त्यहाँ धेरै प्रतिस्पर्धा छैन।
आयरल्याण्डमा प्रिन्ट चाहिन्छ यो इन्फोग्राफिक उत्पादन गर्दछ सुझावहरू प्रदान गर्न जुन तपाईंलाई तपाईंको खर्चको लागि बढी ध्यान दिन मद्दत गर्दछ, उत्तम व्यवसाय पर्चा सिर्जना गर्दै.
के भन्ने जान्नुहोस्, कसलाई तपाईले भनिरहनु भएको छ, कसरी भनौं, पेशेवर देखिनुस् र तिनीहरूलाई व्यर्थ बस्न नदिनुहोस्। आकार, हेडलाईन, वाक्य संरचना, इमेजरी, रंग र सबै भन्दा धेरै - कल-टु-एक्शन महान प्रदर्शन ब्रोशरको लागि आवश्यक छ। हामी टुक्रा मा केहि प्रकारको फोन ट्र्याकिंग वा ट्र्याकेबल यूआरएल प्रयोग गर्ने सल्लाह दिन्छौं ताकि अरूलाई भन्दा कुनले राम्रो प्रदर्शन गर्छ भन्ने तपाईंलाई थाहा हुन्छ।
प्रिन्ट चाहिन्छ एआईडीए फॉर्मूला सिफारिश गर्दछ:
ध्यान - यो आँखा आकर्षक बनाउनुहोस्।
ब्याज - पाठकलाई चासो राख्नुहोस्।
इच्छा - मनाउने छविहरू र जानकारी प्रयोग गरेर इच्छा सिर्जना गर्नुहोस्।
कार्य - पाठकलाई कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्नुहोस्।
टैग: मदतपुस्तिकाकोब्रोसर डिजाइनपर्चामिडिया किटप्रिन्ट चाहिन्छनीडप्रिन्टएक पानाएक पाना डिजाइनPDFउत्पाद ब्रोशरएक पाना बिक्रीप्रायोजक किट
यो हात राख्नुहोस्: संकट सञ्चारको १० नयाँ नियमहरू
अप्रिल २१ गुगलको मोबाइलगेडेन हो! मोबाइल एसईओ को लागी तपाइँको चेकलिस्ट